Ku hel BQ kaliya hal euro oo mahad leh Jimcaha Madow | Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Bq, Dood-wadaag
Sida aan ognahay, jimcaha madoow ayaa geeska agtiisa ah. Waxaan aragnay dhowr toddobaad xitaa maraqa dalabyada cajiibka ah ee aan ka heli karno maalintan lagu muujiyey jadwalka dad badan. Waana sababta maanta aan kuu keenayno dallacaad aadan seegi karin.
Thanks to dallacsiin la yaab leh waxaad ku heli kartaa BQ kaliya 1 euro. Ka waran? Yaan daneyneynin inuu helo taleefan casri ah oo ka yar qiimaha kafeega? Sii wad akhriska waxaan kuu sheegi doonaa sida aad ku heli karto.
1 BQ loogu talagalay 1 euro jimcaha madow si aad u dhaqso badan
2 Kuwani waa qalabka BQ ee aad ku heli karto 1 euro
2.1 Isniinta 19, 10 cutub oo ah Aquaris X2 Pro 64 GB.
2.2 Talaado 20, 10 cutub oo ah Aquaris M10 16.
2.3 Arbacada 21, 10 cutub oo Cervantes ah 4 ilaa € 1.
2.4 Iyo Khamiista 22, 10 cutub Aquaris U Plus 32 GB.
3 Qalabkan BQ sidoo kale waxay noqon doonaan kuwo xayeysiin ah
3.1 Isniinta 19 laga bilaabo 10am:
3.2 Talaado 20 laga bilaabo 10am:
3.3 Arbaco 21 laga bilaabo 10am:
3.4 Khamiista 22 laga bilaabo 10am:
BQ loogu talagalay 1 euro jimcaha madow si aad u dhaqso badan
Dhiirrigelinta gaarka ah ee ay bixiso shirkadda BQ wax khiyaano ah maleh. Laakiin waa inaad cadeysaa inaad tahay kan ugu dhaqsaha badan ee shabakadda. Intaas waxaa sii dheer, waxaad heli doontaa fursado dhowr ah. Inta lagu jiro Nofeembar 19, 20, 21 iyo 22, dhowr qalab BQ ayaa lagu iibin doonaa kaliya 1 euro. Waxaanan sharxeynaa sida loo helo.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso si aad uga qeyb gasho dalacsiinta ayaa ah iska qor BQ's «Black List». Markaad isdiiwaangeliso waa inaad noqo mid taxadar leh sanduuqa sanduuqa maalin kasta emaylkaaga Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa xiriiriyaha lagama maarmaanka u ah inaad awood u yeelatid inaad ku iibsato qalabka 1 euro. Ugu dhaqsaha badan 10:00 maalmahaas ayaa abaalmarin heli doona.
Saxeex halkan ku qor Liiska Madoow oo hel BQ 1 euro Jimcaha Madow
Kuwani waa qalabka BQ ee aad ku heli karto 1 euro
Isniinta 19, 10 cutub oo ah Aquaris X2 Pro 64 GB.
Talaado 20, 10 cutub oo ah Aquaris M10 16.
Arbacada 21, 10 cutub oo Cervantes ah 4 ilaa € 1.
Iyo Khamiista 22, 10 cutub Aquaris U Plus 32 GB.
Dhamaanba kaliya 1 euro! Intaas waxaa sii dheer kor u qaadistaan ​​aadka u xiisaha badan taas oo waa inaad muujisaa xawaarahaaga, BQ waxay bixisaa heshiisyo waawayn inta lagu guda jiro afartan maalmood ee Madoow. Maalin kasta waxaan ku qaban karnaa aaladaha BQ qiimo ka badan qiimaha xiisaha leh laga bilaabo 10 subaxnimo.
Qalabkan BQ sidoo kale waxay noqon doonaan kuwo xayeysiin ah
Isniinta 19 laga bilaabo 10am:
Talaado 20 laga bilaabo 10am:
- 2 × 1 xulashada qalabka dib loo hagaajiyay.
Arbaco 21 laga bilaabo 10am:
Khamiista 22 laga bilaabo 10am:
BQ guriga ayey daaqadda ka tuurayaan Jimcaha dambe, ma sii deyneysaa? Saxiix BQ Liiska Madoow oo muuji kan ugu dheereeya. Mushaharku waa u qalmaa. Soo qaado taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'BQ smartphone', kaniiniga ama e-akhristaha 1 euro ugana faa’iideystaan ​​Jimcaha soo socda ee Madow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » Ku hel BQ kaliya 1 euro oo ku mahadsan Black Friday
Kaadh ku bixin maayo